Page3of 3	41. ဗကသညီလာခံကို သပိတ်မှောက် ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၅ ခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေ သတင်းစာရှင်း	(2016)
... မုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဗန်းမော်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညီလာခံကို သပိတ်မှောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့် ...	Created on 29 November 2016	42. လူထုဒေါ်အမာ ၁ဝ၁ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား တောင်လေး လုံးကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပ	(2016)
... ဆရာမကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ အနုပညာသမားတွေ၊ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ ကို ...	Created on 29 November 2016	43. လူတွေအစားနေရာယူလာတော့မယ့် ဧည့်ကြိုစက်	(2016)
ဧည့်သည်တွေလိုအပ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ Computer ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့ ဧည့်ကြိုစက်တွေကို Sweden နိုင်ငံက ဟိုတယ်ကြီးတခုမှာ အစမ်းစသုံးနေပါပြီ။ အင်တာနက်ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်မှုပေါ် အဓိက အခြေခံတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ...	Created on 28 November 2016	44. သက်ငယ်မုဒိန်းမှုအတွက် ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို	(2016)
... ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေမှာ ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေပေးနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ...	Created on 27 November 2016	45. ကိုဖီအာနန် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားမည်	(2016)
... မသိရသေးပါဘူး။ ကုုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ ကိုုဖီအာနန် ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ရခုုိင်ပြည်နယ်ဆုုိင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်ကို ပြည်ပပညာရှင် ၃ ဦး နဲ့ ပြည်တွင်းက လူပုုဂ္ဂိုလ် ၆ ဦး အပါအဝင် စုုစုုပေါင်း ...	Created on 27 November 2016	46. တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ တိမ်းရှောင်လာရ	(2016)
... ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇော်မင်း က ပြောပါတယ်။ "ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)နဲ့ မုံးကိုးဘက်ကပါ။ ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) နဲ့ မုံးကိုးဘက်က သူတို့က ဝန်ထမ်တွေပေါ့။ အဓိက ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ။ အခု ၇၆၁ ယောက်ထဲမှာ အဲဒီဘက် ...	Created on 27 November 2016	47. သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဘယ်လိုကာကွယ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သလဲ	(2016)
မြန်မာပြည်မှာ အခုတလောကြားနေရတဲ့ စိတ်မချမ်းသာစရာ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှု သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြရင်ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြိုတင်ကာကွယ်ကြရင်ကောင်းမလဲ၊ လူထုအကြား ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ...	Created on 26 November 2016	48. ဖွံ့ဖြိုးရေးဖက် အာရုံမစိုက်နိုင်သေးတဲ့ ရှမ်းဒေသ	(2016)
မငြိမ်းချမ်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေဖက်ကို အာရုံ မလှည့်နိုင်သေးဘူးလို့ ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၃) လားရှိုးခရိုင်က အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ...	Created on 26 November 2016	49. မျက်မမြင်တွေအတွက် 3D ပန်းချီ	(2016)
ပန်းချီပြတိုက်တွေရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အနှစ်သာရတွေကို အခုဆိုရင် အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေလည်း ထိတွေ့ခံစားနိုင်ကြပါပြီ။ 3D သုံးဘက်မြင် ရုပ်လုံးကြွပညာတွေက စက္ကူပေါ်မှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို အသက်ဝင်ပြီး ရုပ်လုံးပေါ်အောင် ...	Created on 25 November 2016	50. စက်ရုပ်နဲ့ အသိဉာဏ်	(2016)
လူသားတွေမပါဘဲ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိမယ့် စက်တွေတီထွင်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ သုတေသနပညာရှင်တွေ ကြိုးစားနေကြတာမှာ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် အတွေ့အကြုံတွေကနေ သူတို့ သင်ယူနိုင်စွမ်း ရှိလာအောင် ...	Created on 24 November 2016	51. Trump အစိုးရသစ်အဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ပါဝင်	(2016)
... ကို ပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် အသီးသီး ရွေးချယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Nikki Haley ကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး၊ အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ ...	Created on 24 November 2016	52. မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်တဲ့ Game များ	(2016)
... သိပ္ပံပညာရှင်တချို့က စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တွေ့ထားပါတယ်။ ဒီဂိမ်းဟာ Alzheimer နဲ့ တခြား ဦးနှောက်ရောဂါတချို့ကို စောစောစီးစီးစမ်းသပ်သိရှိနိုင်ဖို...အသက်ကြီးလာလို့ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါဖြစ်လို့ လူ့မှတ်ညဏ်တွေ ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ ...	Created on 23 November 2016	StartPrev123NextEnd
အနာဂါတ်ရဲ့ Airbus	You are here: mm.myanmars.net
လက် ၂ ဘက်သုံး၍ သွားတိုက်ပါ။	Sidebar